नेपालले ‘ओबिओआर’ बाट कसरी फाइदा लिने?
कात्तिक २६, २०७४| प्रकाशित १३:५३
सियान– चीनको सियानस्थित विज्ञहरुको संस्था (थिंक ट्यांक) साङ्सी इन्स्टिच्युट अफ इनोभेटिभ ट्यलेन्ट डेभलप्मेन्टका कार्यकारी निर्देशक प्राध्यापक चाङ होङले चीनको विशाल आयोजना वान बेल्ट वान रोड (ओबिओआर) बाट नेपालले धेरै फाइदा लिन सक्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। उनले विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनको यो आयोजना र यहाँको समृद्धी नेपालजस्तो छिमेकीका लागि समुद्र भएको र यसबाट कति पानी उभाएर लिने नेपालको क्षमता र अग्रसरतामा भर पर्ने बताए।
हालै यस इन्स्टिच्युटले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा उनले चीनको विशाल आयोजनाको सुरु नै साङ्सी प्रान्तबाट भएकोले यहीँबाट नेपालप्रति सद्भाव राखेको र लाभको ‘मोडालिटी’ भने नेपालले नै तय गर्नुपर्ने बताए।
प्राध्यापक चाङले नेपाल र दुवै देशको फाइदाका लागि अत्यावश्यक आधारभूत पूर्वाधार भनेको ‘कनेक्टिभिटी’ (सडक सञ्जाल) भएको बताए। ‘कतिपय मानिसले ओबिओआरलाई बाटो मात्र भन्ने ठानेका छन् तर त्यतिमात्र नभएर यो द्विपक्षीय फाइदाको आधारभूत आवश्यकता हो र यसबाट नेपालमा चिनियाँ लगानीदेखि चिनियाँ पर्यटकसम्मलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्नेछ,’ उनको धारणा थियो।
उनी नेपालमा लगानी गर्न जाने चाहना कैयौ चिनियाँ उद्योग–व्यवसायीको भएको बताउँछन्। आफ्नो संस्थामार्फत उद्योग–व्यवसायीले इच्छा व्यक्त गर्ने गरेको बताउँदै उनले भने, ‘नेपालमा लगानी जोखिमपूर्ण भएको सोच चिनियाँ लगानीकर्तामा छ। यो भ्रम नेपालले चिर्न सक्नुपर्छ। सडक सहज नहुँदा व्यापारिक आदान प्रदान र आयात निर्यातको सहजतामा पनि प्रश्न उठेको छ। त्यसैले यस्तो कुरामा बढी चासो र अग्रसरता नेपालले लिनुपर्छ र दुवै देश पहिलो चरणमा कम्तीमा पनि सडक सञ्जालमा जोड्नुपर्छ।’
सडकपछि द्विपक्षीय व्यापारमा नेपालले जोड दिनुपर्ने उनको सुझाव छ। ‘हाम्रो छिमेकी समृद्ध भएको देख्न चाहन्छौँ। नेपालले चीनबाट फाइदा लिनसक्ने भनेको व्यापार, लगानी र पर्यटन नै हो। नेपाल बारे सुनेका प्रत्येक चिनियाँ नेपाल आउन चाहन्छन्’ उनले भने।
यो संयोग पनि हुनसक्छ, सियानमा उनले यो विचार राखिरहँदा नेपालमा पनि चाइना रेलवे एड्मिनिस्ट्रेसनका अधिकारीहरुले केरुङ काठमाडौँ हुँदै लुम्बिनीसम्मको रेलमार्गका लागि सर्भे गरिरहेका थिए। उनीहरुले नेपाल सरकार इच्छुक भएमा केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग सम्भव रहेको भन्दै यसको लागतसमेत निकालेका थिए। चीनले सन् २०२० सम्ममा उक्त रुटको रेलमार्ग पूरा गर्नेगरी काम गर्ने बताउँदै आएको छ।
चीन सरकारले अघि सारेको २१औँ शताव्दीको संसारकै सबैभन्दा महत्वाकांक्षी र ठूलो आयोजना ‘वान बेल्ट वान रोड’ (ओबिओआर) को समझदारी पत्रमा नेपालले गत वैशाखमा हस्ताक्षर गरेको थियो। ओबिओआरले आगामी दिनमा नेपालको आर्थिक विकासमा ठूलो टेवा पुग्ने उनको भनाइ थियो। भूपरिवेष्ठित नेपाललाई सडक सञ्जालले जोड्न सकिएमा विश्वको ठूलो पर्यटन बजारका चिनियाँ पर्यटक नेपाल पुग्ने र यस आयोजनामार्फत नेपालमा पूर्वाधारको निर्माण गर्न सके चीन र अरु देशको पनि लगानी भित्रिने उनको विश्लेषण थियो।
चीनले अघि सारेको पछिल्लो अवधारणले एसिया र युरोपका ६४ देशलाई जोड्नेछ। यीमध्ये अधिकांश देश विकासशील छन्। नागरिकको हिसाबले विश्वको ६४ प्रतिशत जनसंख्या यसले ओगट्नेछ। त्यसैगरी विश्वको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब ३७ प्रतिशत हिस्सा समेट्नेछ। यो अवधारणाको सुरुवात चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले सन् २०१३ मा गरेका थिए।
युनिभर्सिटी अफ मेडिकल साइन्सका प्राध्यापक एवं उक्त इन्स्टिच्युटका निर्देशक डा राजिवकुमार झा ओबिओआरको सदस्य भएर नेपालको समृद्धिको ढोका खुलेको बताउँछन्। उनी भन्छन्– नेपालको उत्तरी छिमेकी तथा विश्वकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनको यो महत्वाकांक्षी आयोजनाबाट नेपालले लिने फाइदा धेरै छन्। यसबाट कतिसम्म लाभान्वित हुने भन्नेमा गृहकार्य जरुरी छ।
नेपाल ओबिओआरमार्फत चीनले दक्षिण एसियामा गर्ने लगानीको ‘ट्रान्जिट प्वाइन्ट’ हुनसक्ने उनको धारणा छ। उनी इन्स्टिच्युटको दक्षिण एसिया संयोजक पनि हुन्। ओबिओआर आयोजनाको सफलतामा यो अर्ध सरकारी थिंक ट्याक संस्थाले काम गरेको थियो।
‘चीनसँगको हाम्रो सम्बन्ध पुरानो भए पनि भौगोलिक जटिलता बढी छ। त्यसैले हामीलाई आयात निर्यातमै समस्या छ। यसैले निर्भरता दक्षिणतर्फ बढाएको छ। भरपर्दाे बाटो भइदिए चिनियाँ लगानी र पर्यटक भित्रिन सजिलो हुनेछ,’ उनी भन्छन्।
भूपरिवेष्ठित नेपालले समुद्रसम्मको पहुँच पाउन चीनसँगका कैयौँ नाकाबाट फाइदा लिन सक्नुपर्छ। ती मध्येका सजिला र बाह्रैमास निर्वाध रुपमा सञ्चालनमा आउनसक्ने नाकालाई नेपाल-चीन जोड्ने सेतुका रुपमा सञ्चालनमा ल्याउन सकिएमा यसले चीन हुँदै हाम्रो पहुँच समुद्रसम्म पुग्नेछ।
सन् २०१२ मा चीन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएपछि उसले वैदेशिक लगानीको मात्रामा पनि प्रगति गरेको छ। सन् २०१६ को अन्त्यसम्म चीनले विदेशमा गरेको लगानी १ सय ६० अर्ब अमेरिकी डलर छ। रासस
ग्यास ढुवानी शूल्क बढाउन व्यवसायीको माग, आपूर्ति अवरोध गर्ने चेतावनी
सेयर बजारः ११ अंकले बढ्यो बजार, साढे ९१ करोडको कारोबार
विमानस्थलको नाममा सरकारले ब्रम्हलुट मच्चाउन खोजेको सांसदकाे आरोप
सत्तापक्षकै सांसदको गुनासो : काम नगर्ने मन्त्रालय किन चाहियो?
राज्यका नीति तथा दायित्वको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न संसदीय समिति गठन
पोखराको जनएकता सहकारीबाट लुटियो ९ लाख
नेविसंघद्वारा गृहमन्त्री थापाको राजीनामा माग
बामदेव चकचके थिए, अाेलीलाई उखान अाउँदैनथ्याे : पूर्वसभामुख रानाभाट
विप्लवलाई सहयोग पुर्‍याउँदै सरकार
सांसद चौधरीले मागिन् गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको राजिनामा